Tupu inweta SmartFOCUS, Emailvision zụrụ Ebumnuche Marketer - ihe ntanetị mgbasa ozi. Ọ na-egosi na ha jikọtara njirimara kachasị mma nke teknụzụ ọgụgụ isi na ndị ahịa na ntọhapụ ngwaahịa ha kachasị ọhụrụ, Onye na-ahụ maka mkpọsa mkpọsa. Okwu adịghị eme ya ikpe ziri ezi… ya mere, lee vidiyo ha gbakọtara:
Ekele Nick, Charles na ndị otu na Emailvision! DK New Media so ndị otu na-arụ ọrụ n'oge ha nwetara SmartFOCUS na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ọganihu a na-agbanwe agbanwe na ụlọ ọrụ ahụ. Debanye maka ngosipụta na Emailvision's Campaign ọchịagha Enterprise saịtị.